खानेकुरा पकाएर राख्ने गर्नुहुन्छ ? यसरी बन्नसक्छ विषाक्त पकाएर राखेकाे खानेकुरा - ज्ञानविज्ञान
तीन पोषक तत्व जुन दैनिक भोजनमा सामेल गर्नैपर्ने
पोषक तत्व हाम्रो खानामा सामेल गर्न सके मस्तिष्कदेखि रोग प्रतिरोध प्रणालीसम्मलाई स्वस्थ्य र सुदृढ पार्छ । हामीले शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ र फिट रहन आफ्नो भोजनलाई सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ । यी हुन् महत्वपूर्ण
भिटामिन बीले मानसिक क्षमता वृद्धि गर्छ र मुटुको सुरक्षा गर्छ । ८ वटा भिटामिन बीमध्ये बी १२ र फोलेट सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् । भिटामिन बी१२ ले हामीले खाएको भोजनलाई ऊर्जामा परिणत गर्न सघाउनुका साथै हाम्रो स्नायुतन्त्रको सुरक्षाकवच मानिने ‘माइलिन’ बनाउन आवश्यक पर्छ ।
यसले मस्तिष्कका करोडौं ‘न्युरोन’लाई आपसमा सञ्चार गर्न पनि सघाउँछ । भिटामिन बी१२ को कमीले स्मरण शक्ति घट्ने, भ्रम उत्पन्न हुने र डिप्रेसन हुन्छ । फोलेट गर्भवतीका लागि महत्वपूर्ण मानिए पनि महिला पुरुष सबैका लागि यो उत्तिकै आवश्यक छ ।
भ्रुणको विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामान्यतया शरीरमा फोलेटले मस्तिष्कघात र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढाउने ‘एमिनो एसिड’को मात्रा बढ्न दिँदैन । फोलेट र भिटामिन बी मुटुका लागि आवश्यक पोषण समूहमा पर्छन् ।
भिटामिन बी१२ त्यस्तो दुर्लभ भिटामिन हो, जुन वनस्पति अर्थात् सागसब्जी, फलफूल वा गेडागुडी कुनैमा पनि पाइँदैन । भिटामिन बी१२ अन्डा, चिज, दूध, दही, माछा र रातो मासुमा पाइन्छ ।
तर, फोलेट भने हरिया सागसब्जी, कुरिलो, भिटामिन लगायत विभिन्न पोषक तत्व मिसाइएका तयारी खाद्यान्नमा पाइन्छ ।
शरीरका हाड र रोग प्रतिरोध प्रणालीका लागि भिटामिन डी आवश्यक छ । हामीलाई भिटामिन डीको ठ्याक्कै कति मात्रा आवश्यक पर्छ, वैज्ञानिकहरूले बताउन सकेका छैनन् । तर, अधिकांश अध्ययन अनुसन्धानले शरीर स्वस्थ राख्न भिटामिन डी महत्वपूर्ण रहेको देखाएका छन् ।
यसले क्याल्सियमलाई सोस्न सक्षम बनाउँछ, र क्याल्सियमले हाड बलियो बनाउँछ । रोग प्रतिरोध प्रणालीको प्रभावकारी कामका लागि पनि भिटामिन डी आवश्यक छ । केही अध्ययनले भिटामिन डीको कमी हुँदा क्रोन्स डिजिज (पाचन प्रणाली बिग्रने), ‘युमाटिड आर्थराइटिस’ र ‘मल्टिपल सिरोसिस’जस्ता रोग लाग्न सक्ने देखाएका छन् ।
भिटामिन डी पनि भोजनबाट पाउन कठिन छ । बरु हाम्रो शरीरले नै भिटामिन डी बनाउँछ तर यसका लागि हामीले हाम्रो छालामा बिहानको मधुरो घाम पार्नुपर्छ ।
साथै उत्तरी गोलाद्र्धका बासिन्दाले भने अन्डाको पहेँलो भाग, धेरै चिल्लो पाइने माछा (जस्तै सार्डिन), पोषक तत्व मिसाइएको दूध, सुन्तलाको रस, अन्न आदिबाट भिटामिन डी लिन सक्छन् । यसबाहेक आवश्यक परे चिकित्सकको परामर्शमा भिटामिन डीको ट्याबलेट खान सकिन्छ।
म्याग्नेसियमले निदाउन सघाउनुका साथै दुखाइ घटाउँछ । पछिल्लो समय अनिद्राका रोगीहरू म्याग्नेसियम प्रति हुरुक्क छन् । तर, यसले निद्रा लगाउने औषधिजस्तो खानेबित्तिकै निद्राले लठ्ठ बनाइहाल्दैन । यसले मांसपेशीलाई आराम गर्न सघाउने र मांसपेशीको दुखाइमा आराम दिलाउने भएकाले हिजोआज धावक र कसरत गर्नेहरूबीच निकै लोकप्रिय भएको छ ।
यसले हामीलाई जगाइराख्ने मस्तिष्कको हिस्सालाई सुदृढ बनाउँछ । यसले हामीलाई राति निद्रा बिथोल्ने सामान्य एन्जाइटी शान्त पार्न पनि मद्दत गर्छ । म्याग्नेसियमले माइग्रेनको दुखाइ कम गर्ने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
भोजन सम्बन्धी अधिकांश सर्वेक्षणले अमेरिकीहरूलाई म्याग्नेसियमको कमी भएको देखाएका छन् । यसको कारण भने फाइबर धेरै मात्रामा पाइने सागसब्जी र ब्राउन राइस म्याग्नेसियमको मुख्य स्रोत हुन् र अमेरिकीहरूले भोजनमा यी दुवैको साटो प्रशोधित र डिब्बाबन्द खानेकुरा खान्छन् । पर्याप्त फाइबर र म्याग्नेसियमको पोषण पाउन विभिन्न खालका बिउहरू अझ (हाडे बदाम, ओखर, फर्सीको बिउ) खानु उपयुक्त हुन्छ ।
Don't Miss it हामी स्वादको चक्करमा स्वास्थ्यलाई पार्दैछाै बर्बाद, जंक फूडले यसरी पार्दैछ शरीर सखाब
Up Next हाम्राे भान्सामा नियमित पाक्ने आलुलाई यति गरे स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा, थाहा पाइराख्नुहोस्
ज्योतिष शास्त्र भन्छ, जुता लगाउन नजान्दा पनि बिग्रिन्छ भाग्य
यहाँ हामीले लगाउने जुता र त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभावबारे उल्लेख छ कसले कस्तो जुता लगाउने ? यदि तपाईं…
औषधी उपचारमा तितेकरेलाको प्रयोग
हामीले तितेकरेला सेवन गर्दा हुने फाइदाहरु र बेफाइदा साथै कस्तो व्यक्तिले खान मिल्छ र कस्तोले मिल्दैन भनेर अघिल्लो पोस्टहरुमा बयान…
यस्ता छन, घ्युकुमारीको जुस पिउदा हुने फाईदा
घ्युकुमारी प्राय रोप्दा सबै तिर उम्रेने बिरुवा हो । कति मानिसहरुले यसलाई आफ्नो घरको छत्को गमलामा पनि रोपेर यसको फाईदा लिइ…
धेरै गुलियो खादा स्वास्थमा हानी पुग्छ
ग्लुकोजले शरीर र मस्तिष्क दुवैलाई सकारात्मक असर पार्ने देखाइएको थियो । यसले हाम्रो स्मरणशक्ति बढाउने बताइएको थियो । चिनीको अत्यधिक…
एभरल लभिनलाई गुगलमा सर्च गर्नु खतरनाक, कसरी जोगिने ?
गायककारहरु धेरै खालका हुन्छन जो आफ्नै तरिका तथा आफ्नै शैलीमा गाउने गर्दछन । संसारमा यस्ता पनि र्यापर तथा गायककार छन्…